मोदीसँगको भेटमा प्रियंकाले किन मिनि ड्रेस लगाएकी थिइन् ? | Ratopati
मोदीसँगको भेटमा प्रियंकाले किन मिनि ड्रेस लगाएकी थिइन् ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २९, २०७७ chat_bubble_outline0
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । कहिलेकाँही उनी आफ्ना तस्बिरहरुका कारण ट्रोलको शिकार पनि भएकी छिन् । २०१७ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसामु मिनि ड्रेस लगाएर बसेको तस्बिर भाइरल भएपछि उनी ट्रोलको शिकार भएकी थिइन् । यस घटनाबारे प्रियंकाले आफ्नो पुस्तक ‘अनफिनिस्ड’ मा चर्चा गरेकी छिन् ।
प्रियंकाकाअनुसार प्रधानमन्त्री मोदी र उनीबीच त्यस समय बर्लिनको एक होटलमा भेट भएको थियो । प्रियंकाका अनुसार त्यस समय उनी आफ्ना अमेरिकी प्रचारक र भाईसँग थिइन् । त्यही भेटका केही तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेकी हुन् ।
‘मैले यसकारण त्यो ड्रेस लगाएको थिएँ, किनकी म ती दिनहरुमा ‘बेवाच’ फिल्मको पनि प्रमोशन गरिरहेको थिएँ’ प्रियंकाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छिन् । प्रियंकाको फोटो त्यतिबेला निकै भाइरल भएको थियो । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले देशको प्रधानमन्त्रीसामुु यस्तो पोशाकमा उपस्थित हुन नहुने धारणा राखेका थिए । बलिउडसँगै हलिउड फिल्ममा पनि प्रियंका सक्रिय छिन् ।
#prinkya chopada#narendra modi